सेमिसेक्स्टाइलले ज्योतिषमा के भन्न खोजेको हो? - बुध
सेमिसेक्स्टाइलले ज्योतिषमा के भन्न खोजेको हो?
प्रश्नहरू र उत्तम उत्तरहरू - सूर्य सेमीसेक्टाइल बुध
प्रतीकअर्ध सेक्स्टाइल। दुई ग्रहहरूको बिच 30० डिग्रीको पक्ष। कोअर्ध सेक्स्टाइलएक सानो पक्ष मानिन्छ। यो विरलै व्याख्यामा सामेल गरिएको छ, किनभने किनभने degrees० डिग्रीको एकाइहरु भिन्न अर्थ भएका प्रमुख पक्षहरुको अपरिष्कृत भवन ब्लाक हो।
मौरिन, तपाईको प्रश्नको लागी धन्यवाद। Quincunxes मुश्किल पक्ष हो। तिनीहरू प्राविधिक रूपमा साइनको सम्पूर्ण पक्षहरू हुन्, तर तिनीहरू केवल हार्मोनिक पक्षहरूको रूपमा कार्य गर्दछन्।
र तिनिहरु धेरै फरक अनुभव गर्दछन् कि त्यहाँ दुई व्यक्तिगत ग्रहहरु, एक व्यक्तिगत ग्रह र बाहिरी ग्रह, वा एक गतिशील पक्ष को रूप मा एक ट्रान्जिट वा एक प्रगति मा निर्भर गर्दछ। मूल कुराको साथ सुरू गरौं। Quincunx १२ औं हार्मोनिक पक्ष हो जुन दुई ग्रहहरूको बीचमा १ 150० को दूरीमा हुन्छ।
Quincunx मा संलग्न संकेतहरूसँग केहि मिल्दैन: तिनीहरूसँग फरक तत्व, मोडेलिटी र ध्रुवीयताहरू छन्। परम्परागत ज्योतिष मा, Quincunx मा संकेत जोडी 'अस्वीकार' भनिएको थियो किनभने लक्षणहरु एक अर्को 'देखेन'। Quincunx - कहिलेकाँही inconjunct को रूपमा पनि भनिन्छ - एक गैर-पक्षको रूपमा हेरिएको थियो।
यसको मतलब दुई ग्रहहरू बीच पूर्ण संचारको कमी थियो। वर्ग वा विपक्षका लक्षणहरू धेरै समान छन्। वर्गहरू बीच नै समान संकेतको साथ संकेतहरूमा देखा पर्दछ - कार्डिनल, फिक्स्ड, वा भ्यारीएबल - तर बिभिन्न तत्वहरू र विभिन्न ध्रुवीकरणहरू।
वर्गमा सँधै मर्दाना चिन्ह (आगो वा वायु) र एक स्त्री चिन्ह (पृथ्वी वा पानी) हुन्छ। स्क्वायरहरू चौथो हार्मोनिक पक्ष हो। ती ग्रहहरूको बीचमा देखा पर्दछ जुन तीन संकेतहरू अलग छन्, र ठीक वर्गमान 90 ०-डिग्री कोणको बराबर हुन्छ।
त्यहाँ अझै धेरै साझा छ किनकि ग्रहहरूले समान मोडेलिटी साझा गरेका छन्, तर तिनीहरू एक अर्काको विरुद्दको रूपमा देखिन्छन्। वर्गले तनाव र घर्षण सिर्जना र कार्य सिर्जना गर्दछ। वर्गहरूको कुञ्जीले एउटा तरिका पत्ता लगाइरहेको छ जुन दुई ग्रहहरूले केहि निर्माण गर्न सँगै काम गर्न सक्दछन्।
विपक्षहरू समान मोडलिटी र ध्रुवीयताका साथ संकेतहरूमा ग्रहहरू बीच देखा पर्दछ - आगो र हावा वा पृथ्वी र पानी बीच। विपक्षहरू दोस्रो सामञ्जस्यपूर्ण पक्ष हो। तिनीहरू ग्रहहरू बीच हुन्छन् जुन signs संकेतहरू अलग छन् र सटीक विरोध १ 180० डिग्री ए angle्गल हो।
दुई ग्रहहरु उही विषय संग सौदा तर यसको विपरीत कोण बाट। संतुलन सँधै एउटा विपक्षीसँग सम्भव हुन्छ किनकि ग्रहहरूमा धेरै समानता छ। यद्यपि विपक्षहरूले प्राय: आक्रमण र द्वन्द्वलाई जनाउँछ।
तिनीहरू सधैं एक सम्बन्ध मा खेल्छन्। तपाईं एक ग्रहको स्थान लिनुहुन्छ र अर्को ग्रहको तपाईंको विषयवस्तुहरू अर्कोमा प्रोजेक्ट गर्नुहुन्छ र अनुभव गर्नुहोस् यदि यो तपाईं बाहिरबाट आएको हो। दुबै वर्ग र विरोधीलाई 'मुख्य पक्षहरू' मानिन्छ।
तिनीहरू चिन्हका सम्पूर्ण पक्षहरू हुन्। यसको मतलब यो छ कि मेषको प्रत्येक ग्रह क्यान्सरको हरेक ग्रह चारैतिर छ। र वृषभको हरेक ग्रह वृश्चिकको हर ग्रहको सामना गर्दछ।
निस्सन्देह, ग्रहहरू बीचको कोण पूर्ण पक्षको नजिक छ, जडान त्यति नै बलियो हुनेछ। Quincunxes प्राविधिक रूपले साइनको सम्पूर्ण पक्षहरू हुन् किनकि ती ग्रहहरूको बीचमा हुन्छन् जुन पाँच संकेतहरू अलग छन्। यद्यपि क्विन्क्सले केवल हार्मोनिक पक्षहरूको रूपमा कार्य गर्दछ।
ग्रहहरू १ qu०-डिग्री ए angle्गलको केहि डिग्रीको बीचमा क्विन्क्समा हुनुपर्दछ। जब तपाईसँग दुईवटा व्यक्तिगत ग्रहहरू एक अर्कासँग क्विन्क्समा हुन्छन्, ती ग्रहहरू एक अर्कासँग सम्बन्धमा बाध्य हुन्छन्। उनीहरूसँग समान केही छैन र सबैसँग धेरै खुशी हुने थियो यदि उनीहरूसँग अर्कोसँग केहि गर्न नदिएको भए, तर क्विन्क्सले तिनीहरूलाई प्रदान गर्दैन।
Quincunx विपक्षको चिह्न हो, ग्रहहरु मा लाग्छ कि तिनीहरूले एक साझा जमीन हुनुपर्छ र एक सन्तुलन खोज्नु को लागी। तर त्यहाँ कुनै साझा आधार छैन र कुनै सन्तुलन सम्भव छैन। एउटा ग्रह व्यक्त गर्न, एउटाले अर्कोलाई दबाउनु पर्छ।
यी विवादहरूको समाधान गर्न यसले ऊर्जाको महत्त्वपूर्ण रकम लिन्छ, र यो अत्यन्त निराशजनक हुन सक्छ। बाहिरी ग्रह (जुन यस सन्दर्भमा शनि पनि समावेश गर्दछ) र एक व्यक्तिगत ग्रह बिचको Quincunx एक फरक कहानी छ। यी अवस्थाहरूमा, तपाईं बाह्य ग्रहलाई अन्य व्यक्तिहरूमा (वा सामान्य रूपमा संसारमा) प्रोजेक्ट गर्नुहुन्छ र व्यक्तिगत ग्रहको मामिलामा अनियमित, अप्रत्याशित, र अप्रत्याशित अवरोधहरूको अनुभव गर्नुहुन्छ।
के एक बाहिरी ग्रह को वर्गफूल वा बाहिरी ग्रहको विरोध भन्दा धेरै गाह्रो बनाउने के अनियमित कारक हो। बाह्य ग्रहको वर्ग हुनु वा व्यक्तिगत ग्रहको विपरित चुनौति र विरोधाभास प्रस्तुत गर्दछ, तर तपाइँले के आशा गर्नुहुन्छ थाहा छ। त्यहाँ स्पष्ट कारण र प्रभाव सम्बन्ध छ।
प्रत्येक चोटि तपाईं A गर्नुहुन्छ, बी हुन्छ। यदि तपाइँ B को अनुभव गर्न चाहनुहुन्न भने, ए नगर्नुहोस्। क्विन्क्ससँग, तथापि, त्यहाँ कुनै स्पष्ट कारण र प्रभाव छैन।
कहिले काहिं A, B हुन्छ, तर हरेक पटक हुँदैन। र कहिलेकाँही बी नीलोबाट बाहिर देखा पर्दछ। यसले मनोविज्ञानमा 'सिकेको असहायता' को रूपमा चिनिने राज्य सिर्जना गर्न सक्दछ।
तपाईं कारवाही गर्न डराउनुहुन्छ किनकि तपाईं परिणामहरू देख्न सक्नुहुन्न। याद गर्नुहोस् तपाईंले कसरी राशिफलको अनुभव गर्नुहुन्छ तपाईंको चेतनाको स्तर द्वारा निर्धारण गरिन्छ, न कि ज्योतिष। तपाईंको जन्म चार्टको चुनौतीपूर्ण पक्षले सीमित गर्दैन वा तपाईंलाई खुशी हुनबाट बचाउँदैन।
कुंडलीमा प्रत्येक प्रतीकको कम र उच्च चेतना अभिव्यक्तिहरू छन्। Quinkunxes पनि गतिशील पक्ष हुन सक्छ - जहाँ एक ट्रान्जिटिंग, उन्नत, वा निर्देशित ग्रह तपाईंको जन्म चार्टमा एक ग्रहमा एक quinkunx रूप। Bernadette ब्रैडी भन्छ कि गतिशील quincunxes अन्त र अलग सिर्जना किनभने तिनीहरूले मौलिक संदर्भ परिवर्तन गर्दछ।
ब्र्याडीका अनुसार गतिशील वर्गले दिशा बदल्न र नयाँ र अपरिचित कार्यहरू लिन बाध्य पार्छ, जबकि गतिशील विपक्षीहरूले तपाईंलाई छनौट वा निर्णय लिन बाध्य पार्छ।
ग्रहको पक्ष के हो?
'त्यहाँ पाँच प्रमुख छन्पक्षहरु(ट्राइन, सेक्स्टाइल, संयोजन, विपक्ष, र वर्ग), 'ज्योतिषी लिसा स्टारडस्टले बस्टललाई भन्छन्। 'पक्षहरूकसरी छन्ग्रहहरुफरक संकेतहरूमा काम गर्दा।२। २०१।
तर यो ज्योतिष मा एक पाठ छैन। यो आध्यात्मिक व्याख्या हो जुन व्यावहारिक र बुझ्न सजीलो छ, र हामी मध्ये धेरै जसो यस बारे पूर्णतया अनजान छौं।
जसरी तपाईंले मेरो अन्य लेखहरूमा भन्नुभएको सुन्नुहुन्छ: संकुचित प्रकाश-ईथर जीवहरू जस्तो, हामी सबै पूर्ण रूपमा आत्मिक प्राणीहरू हौं जो एक समय पूर्ण आत्मिक वास्तविकतामा बाँचेका थिए (परमेश्वर, प्रेम, स्वर्ग, तपाईं जे पनि नाम राख्न चाहानुहुन्छ)। यद्यपि इन्स मा हामीले स्वार्थी, आत्मकेन्द्रित, र प्रेमहीन विचारहरु र कार्यहरु को माध्यम बाट टाढा यो निरपेक्ष वास्तविकता बाट आफूलाई अलग छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा हामीले आफ्नो शुद्ध आध्यात्मिक सारलाई छायाँ दिएका छौं, हाम्रो आत्मा, बोझले हामीलाई तन्दुरुस्त बनाएको छ र हामीले आफूलाई भौतिक ब्रह्माण्डको स्तरमा झार्‍यौं जुन अब हामी यस पृथ्वी पृथ्वीमा बारम्बार अवतरण गर्छौं, भौतिक शरीरमा, जसमा हामी पुनर्जन्मको चक्रमा अडिएका छौं।
पूर्ण वास्तविकता संग हामी कारण वा सापेक्ष ब्रह्माण्डमा प्रवेश गरेका छौं। यहाँ हरेक कारण को लागी एक प्रभाव छ। यो छर्ने र बाली काट्ने क्षेत्र हो।
जे हामी बाहिर पठाउँछौं हामीलाई फिर्ता आउँछ। यद्यपि यो जीवनकाल सधैँ हामीसँग धेरै जीवन समयहरू पछि आउँदैन। अब प्रश्न छ: कसरी र कहाँ हाम्रो सबै भावनाहरू, विचार, शब्दहरू र कार्यहरू रेकर्ड गरिएको छ? म यस लेखमा अझ गहिराइमा जान्छु कसरी कर्मा काम गर्दछ।
तर मलाई यहाँ संक्षेप दिनुहोस्: हामी के महसुस गर्छौं, सोच्दछौं, बोल्छौं, वा गर्छौं धेरै स्थानहरूमा भण्डार गरिन्छ, जस्तै कम्प्युटरहरूमा: पहिलो, - अवश्य पनि - हाम्रो आत्मामा। त्यसो भए यो हाम्रो जीनमा पनि भण्डार गरिएको छ, हाम्रो कोशिकामा, आकाश रेकर्डमा र सबै भन्दा माथि मिल्दोजुल्दो ग्रहको तारामंडल र अर्ध-भौतिक ब्रह्माण्डमा समान कम्पनको साथ। जस्तै आकर्षणहरू।
ताराहरू र ग्रहहरू हाम्रो सबै नकारात्मक पक्षहरूको रेकर्ड हो। जीवन जागरूकता हो र जागरूकता पठाउँदै र प्राप्त गर्दै। सबै चीजहरू स्थिर संचारमा हुन्छन्, सहित सबै तारा, ग्रहहरू र आकाशगंगाहरू भौतिक र अर्ध-भौतिक ब्रह्माण्डमा के गर्छन्।
तिनीहरू एक ब्रह्माण्ड जानकारी, भण्डारण र संचार प्रणाली जुन निरन्तर शिफ्ट र सर्दै छ। हामी अकल्पनीय रूपमा ठूलो संचार नेटवर्कमा बस्छौं। ताराहरू र ग्रहहरू निरन्तर जानकारी पठाउँदै र प्राप्त गर्दैछन्।
हाम्रो दिमाग जस्तै। यहाँ तपाईं यी दुई प्रणालीहरू बीच अद्भुत समानता देख्न सक्नुहुन्छ। म्याक्रोकोसम र एक माइक्रोक्रोसम।
के हामीले कहिल्यै सोच्दछौं कि उपग्रह कार्यक्रमको आविष्कार कसरी भयो? टेक्नोलोजीले केवल ब्रह्माण्डको प्राकृतिक प्रक्रियाको प्रतिलिपि गरेको छ। इन्स र धेरै भन्दा धेरै जीवनहरू, हामी सबैको धेरै नकारात्मक पक्षहरू छन् - अर्को शब्दमा: धेरै फोहोर - यस विशाल ब्रह्माण्ड कम्प्युटरमा लोड। समस्या यो हो कि आज हामी ती सबै खराब चीजहरू जान्दैनौं र याद गर्दैनौं जुन हामीले पहिले भन्दा पहिले गरेका थियौं वा अघिल्लो जीवनहरूमा पनि कम।
र यो जहाँ ग्रहहरू आउन र मद्दत गर्न आउँछन्: तिनीहरू हाम्रो व्यक्तिगत डेटाबेस हुन्। जहिले पनि तिनीहरू कुनै निश्चित स्थिति वा संतृप्तिमा पुगेका हुन्छन्, तिनीहरू हामीलाई तिनीहरूकै लागि पुनः लोड गर्दछन् जुन हामीले एक पटक तिनीहरूमा भण्डार गर्यौं। यसलाई कर्म भनिन्छ।
हामीले जे रोपेको कटनी गर्छौं। यो एक सानो उत्तेजक अवस्थादेखि भाग्य, बिमारी र अन्य प्रकोपको भयानक स्ट्रोकमा पर्दछ। प्रत्येक दिन यी ग्रहहरु लाई हामी के को लागी सामना गर्न र ज्ञानको लागी फिर्ता पठाउँछन्।
त्यसकारण हामीलाई थाहा छैन कि नयाँ दिनले के ल्याउँदछ। र हरेक दिन सबैको लागि पूर्ण फरक हुन्छ। विशेष कर्मको यो डाउनलोडिंग सम्पूर्ण देशको रूपमा ठूलो समूहहरूको लागि पनि हुन सक्छ।
यसलाई समूह कर्म भनिन्छ। तर यहाँ राम्रो कुरा छ: सबैभन्दा डरलाग्दो चीजहरू जुन हामीले एक पटक गर्‍यौं र यस ग्रहमा बचत गरेका थियौं अचानक वा पूर्ण आश्चर्यमा हामी समात्ने छैनौं। होइन, हामी जहिले पहिले केही सचेत चेतावनीहरू प्राप्त गर्दछौं; हामी सनातन कानून द्वारा लगातार सल्लाह दिईन्छ यसले हामीलाई हाम्रो नकारात्मक गतिविधिहरू रोक्न र चीजहरू खाली गर्न अनुमति दिन्छ उनीहरूले हामीलाई पूर्ण रूपमा प्रभाव पार्नु भन्दा पहिले।
यो सफाको मतलब सामान्यतया अरुलाई क्षमा गर्नु, क्षमा माग्नु, पश्चाताप गर्नु र रोकिनु हो। अर्को शब्दमा, LOVE लाई फिर्ता ल्याउनका लागि जहाँ हामी एक पटक हाम्रो अहम् द्वारा शासित भयौं। यस तरिकाले हामी हाम्रो आत्मालाई तनावपूर्ण आत्मा कपडाका धेरै तहहरूबाट बिस्तारै मुक्त गर्दछौं।
यो पूर्ण स्वतन्त्रताको लागि बाटो हो। घर फिर्ता मार्ग। हामीलाई डाउनलोड गरिएको जानकारी हाम्रो दिनको निर्माण ब्लक हो।
प्रत्येक सेकेन्ड, मिनेट र घण्टा जानकारी समावेश हुन्छ जुन हामीले एक पटक causal कम्प्युटरमा भण्डारण गरेका छौं। औसत जीवन प्रत्याशा केवल 800००,००० घण्टाको साथ। हामी अब देख्न सक्छौं कि हरेक घण्टा हाम्रो लागि अत्यन्तै बहुमूल्य र सावधानीपूर्वक डिजाइन गरिएको छ।
र हामीले पार्थिव जीवनको अनुभव गर्नुको मुख्य कारण यो हो कि हामीले एक पटक विश्वव्यापी कारण कम्प्युटरमा भण्डार गरेका सबै फोहोरहरू सफा गर्नु हो। र यदि हामी यस जीवन समयमा सतर्क छैनौं भने, हामी नयाँ नकारात्मक पक्षहरू अपलोड गर्न जारी राख्नेछौं जसले अन्ततः हाम्रो भविष्यका दिनहरू र पृथ्वीमा जीवन परिभाषित गर्दछ। हाम्रो बाह्य र आन्तरिक इन्द्रिय आत्म-अन्वेषणको क्षण हो।
हामी किन सोध्यो? जीवनमा कुनै दुर्घटना हुँदैन। ताराहरूले हाम्रो घरमा हुँदा, हजुरआमालाई भेट्न वा टिम्बुक्टुको भ्रमण गर्दा आज हामी पक्कै पनि यसले असर गर्छ, यो तथ्य तथ्य यो हो कि हामीले अचानक त्यस्तो व्यक्तिको बारेमा सोच्नुपर्दछ जुन हामीसँग धेरै समय अघि घटेको थियो, वा चित्रले ईर्ष्या जगाउने छवि , रिस वा हामीमा अन्य भावनाहरू। वा हामीलाई अचानक हाम्रो बाल्यकालदेखि नै कुनै पीडादायी चीजको याद आउँदछ।
हाम्रो वरिपरिको सबै कुरा हामीलाई बोल्छन्। यदि तपाईंले मेरो लेख प्रोजेक्टको कानून देख्नु भएको छ भने, तपाईंलाई थाहा छ कि हामी वरपरका सबै चीजहरू आफैंमा ऐना हुन्। सबै कुरा हामीलाई केहि भन्न चाहान्छन् र यो हाम्रो फाइदाको लागि राम्रोसँग मंचित छ।
हामी हाम्रो अभिभावकलाई हाम्रो अन्तस्करण छुने आग्रह गर्न सक्दछौं ताकि हामी आज के उज्यालो बनाउन सक्छौं भनेर बुझ्न सक्दछौं। हामीभित्र र परमेश्वर भित्रको परमेश्वरको शक्तिले हामी इमान्दारीपूर्वक पश्चात्ताप गर्छौं र यसलाई सफा गर्छौं र अब गर्दैनौं। अब, क्षणको लागि, हामी यी महत्त्वपूर्ण आवेगहरू छोड्ने छैनौं।
त्यसैले मलाई यो संक्षेपमा प्रस्तुत गर्दछु: हाम्रा सबै नकारात्मक भावनाहरू, विचारहरू, शब्दहरू र कार्यहरू ब्रह्माण्डहरूको सौर्यमण्डलको भण्डारमा भण्डार गरिएको छ। यसको निरन्तर परिवर्तन भरीरहेको स्थिति वा संतृप्ति अनुसार यो जानकारी हामीलाई कर्माको रूपमा लोड गरिएको छ। प्रत्येक सेकेन्ड, प्रत्येक मिनेट र दिनको हरेक घण्टाले हामीलाई यो कर्मको प्रभावहरू कम गर्ने अवसर दिन्छ जुन हामीमा फर्कन्छ।
विषय पुस्तकमा केहि पुस्तकहरू छन् जुन अमेजनमा एकदम थोरै मूल्यमा उपलब्ध छ। यसलाई गैब्रिएलद्वारा LIVE THE MOMENT भनिन्छ। सधैं जस्तो, यो तपाईं संग हुन सम्मान थियो।
म कसरी मेरो चार्टमा पक्षहरू फेला पार्न सक्छु?
तपाईं कसरी गर्नुहुन्छफिगरबाहिरपक्षहरुकेवल एक मा हेरीचार्ट?
चरण एक: प्रत्येक चिन्हको लागि तत्त्व र मोड याद राख्नुहोस्। तिनीहरूलाई राम्रोसँग सिक्नुहोस्।
चरण दुई: पार्टनर तत्त्वहरू याद राख्नुहोस् यो सजिलो छ यदि तपाईंलाई थाँहा छ भनेतपाइँकोतत्वहरु।
चरण तीन: विपरीत जोडीहरू याद गर्नुहोस्। तपाईले यो दृश्यमा पनि चिन्न सक्नुहुन्छ।
हे साथीहरु! लभेन्डायरमा पुन: स्वागत छ, म मेरो च्यानलमा रमाईलो खोज-अन्वेषण उपकरणहरूको श्रृंखला जारी राख्दैछु, त्यसैले यदि तपाईंले पहिलो लेख हराउनुभयो भने मैले ट्यारो कार्डको बारेमा कुरा गरिरहेको थिएँ र तिनीहरूलाई कसरी शुरुआतको रूपमा प्रयोग गर्ने भनेर किनभने मैले गरें। म एक शुरुआत हुँ आज म ज्योतिषको बारेमा कुरा गर्न उत्साहित छु। ज्योतिष त्यस्तो चीज हो जसले मलाई मेरो जीवनको अधिकांश व्यस्त राख्यो, शाब्दिक रूपमा बाल्यावस्थादेखि नै, र यो होइन कि म यसमा वा कुनै पनि कुरामा विशेषज्ञ हुँ।
तर म स्टीभेन फोरेस्टको पुस्तक 'इनर स्काई' भन्दा गत वर्ष ज्योतिष र नेचुरल चार्ट पढ्नमा बढी थालें। मैले जन्मजात चार्ट पढ्ने बारेमा धेरै कुरा सिकें, ज्योतिषविद्याको बारेमा धेरै र यसको मतलब के मैले पत्ता लगाए कि मलाई औसत व्यक्ति भन्दा ज्योतिषको बारेमा बढी थाहा छ। त्यसैले यो लेख औसत व्यक्ति को लागी हो।
यदि तपाईं विशेषज्ञ हुनुहुन्छ भने यसमा हेर्नु आवश्यक पर्दैन। तर म ज्योतिषलाई तपाईको सूर्य संकेत भन्दा बढी गहिरो वर्णन गर्न चाहन्छु। त्यसोभए रमाईलो लेखको लागि तयार हुनुहोस्! सर्वप्रथम सब भन्दा पहिले, स्पष्ट गरौं: खगोल विज्ञान आकाशीय पिण्डहरूको वैज्ञानिक अन्वेषण हो, त्यसैले यो cts र अनुसन्धानमा आधारित छ; र ज्योतिष भनेको आकाशीय पिण्डहरूको अर्थ हो, अर्थात् हामी आकाशमा के हुन्छ यो यसरी व्याख्या गर्दछौं।
यो कविता हो, यो कला हो। तर यो साँच्चिकै राम्रो छ कि सबै चीजको एक अर्थ हुन्छ र यो वास्तवमै वैज्ञानिक होइन, तर यो एक कला हो। त्यसोभए जन्मजात चार्ट के हो? तपाईंको ज्योतिषीय जन्मजात चार्ट मूलत: तपाईं जन्मनुभएको समय र स्थानमा आकाशको स्नापशट हो, जहाँ तपाईं जन्मनु भएको संसारमा र सही समय, यो स्वर्गमा के हो भन्ने कुराको चित्र हो।
यो सबै ग्रहहरु को एक प्रकारको नक्शा हो, सूर्य र चन्द्रमा। त्यसो भए तपाईको जन्मको सहि समयका बारे सटीक हुनु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ किनकि हरेक घण्टा वा दुई मा तपाईको जन्मजात चार्ट परिवर्तन हुन्छ किनकि आकाश घुम्छ - होइन, पृथ्वी चल्छ - र यस्तै प्रकारले सार्दछ यदि तपाईं प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने आकाशको स्नापशट जन्म भयो। तपाईंको वास्तविक जन्मजात चार्ट r साइड नोट: यदि तपाईं चिनियाँ हुनुहुन्छ भने मलाई थाहा छ कि चिनियाँ संस्कृतिमा अन्धविश्वास छ, फेen शुई र ती सबै चीजहरूका कारण तपाईको मिति / समय कसैलाई पनि दिनुहुन्न। त्यसैले म मेरो वास्तविक जन्मजात चार्ट वा केहि पनि पोस्ट गर्न चाहन्न।
तर हामी विश्वास गर्दछौं कि एकचोटि कसैले तपाईंको सही मिति र जन्म समय थाहा पायो भने, उनीहरूलाई तपाईंको भाग्यको बारेमा धेरै थाहा हुन्छ र मानिसहरूले यसलाई तपाईंको विरूद्ध प्रयोग गर्न सक्दछन्। त्यसोभए यो मैले व्यक्तिगत रूपमा गरें - किनकि मेरी आमाले मलाई प्रभावित गर्नुभयो - व्यक्तिगत रूपमा म यसलाई अझ बढी गोप्य राख्न चाहन्छु, त्यसैले तपाईलाई थाहा दिनुहोस्। त्यसोभए तपाईं कसरी आफ्नो जन्मजात चार्ट पढ्नुहुन्छ? त्यहाँ धेरै वेबसाइटहरू छन् जहाँ तपाईं यो जानकारी प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
क्याफे ज्योतिष एक हो, Astro.com अर्को हो। र त्यहाँ मोबाइल अनुप्रयोगहरू पनि छन् जुन तपाईले आफ्नो जन्मजात चार्ट जाँच गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
मेरो मनपर्ने ज्योतिष अनुप्रयोग सह-तारा हो। यो एक धेरै आधुनिक र ठाडो छ र तपाइँको जन्म चार्ट र सबै विवरण धेरै सफा तरीकाले रूपरेखा। त्यसैले यी जाँच गर्नुहोस् - म तिनीहरूलाई तल लिंक गर्दछु।
अब मूल त्रिकोणको बारेमा कुरा गरौं जुन तपाईंको सूर्य, चन्द्रमा, र आरोही हो। कहिलेकाँही मानिसहरू आरोहीलाई उनीहरूको 'आरोहण' चिन्हको रूपमा पनि लिन्छन्। यी तीन थप महत्त्वपूर्ण स are्केतहरू हुन्, सामान्यतया तपाईको जन्म चार्टमा, त्यसैले तपाईले अन्य व्यक्तिहरू देख्न सक्नुहुनेछ जो साँच्चिकै ज्योतिषमा रुचि राख्दछन्, ती सबै ती तीनवटा संकेतहरू सूचीबद्ध गर्दछन् किनकि ती तीनैवटा मात्र तपाईको सूर्य चिन्ह भन्दा बढि सूचीबद्ध गर्न महत्वपूर्ण छन्।
तपाईको सूर्य चिन्ह मात्र तपाई जन्मेको दिन देखि निर्भर गर्दछ, तपाई जुनसुकै मौसममा हो। म जन्म अक्टुबरमा भएको हुनाले म एक तुला हुँ। BTW, मसँग यो डायरी छ जुन मैले पढेको ज्योतिष पुस्तकबाट धेरै नोटहरू बनाए त्यसैले म अब र पछि यसलाई सन्दर्भ गर्न सक्दछु।
सामान्यतया, तपाइँको सूर्य चिन्हले तपाइँको अहंकार, तपाइँको व्यक्तित्व, तपाइँको स्व-छवि प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो तपाईं को हो को मूल हो। तपाईंको चन्द्रमा चिन्हले तपाईंको भावनात्मक आत्मलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ।
तपाईंको चन्द्रमा तपाईंको संवेदनशीलता, तपाईंको भावना, तपाईंको भावना, तपाईंको मुड, तपाईंको मुटु हो। कहिलेकाँही मानिसहरूले आफ्नो चन्द्रमा चिन्हलाई आफ्नो सूर्य संकेत भन्दा बढी सन्दर्भ गर्दछ किनभने तपाईंको चन्द्रमा तपाईंको भावनात्मक हो र तपाईं त्यो चिन्हको बारेमा बढी महसुस गर्नुहुन्छ। र तपाइँ जुन चाँहि तपाइँको चन्द्रमामा रहेको चिन्ह हो, जुन तपाइँलाई खुशी पार्ने कुराको स .्केत हो र कुन कुराले तपाइँलाई पूरा भएको महसुस गर्छ।
ठिक छ, म एक धनु राशि चन्द्र हो र धनु साहसिक र अन्वेषणको बारेमा हो, नयाँ चीजहरू खोज्दैछ, र म प्रायः त्यससँग पनि सम्बन्धित हुन सक्छु। तपाईंको आरोही वा 'आरोहण' चिन्ह अनिवार्य रूपमा संसारको लागि तपाईंको मास्क हो। यो अन्य व्यक्तिले तपाईंलाई कसरी बुझ्ने छन्।
यसलाई पहिलो प्रभावको रूपमा सोच्नुहोस्। अन्य व्यक्तिहरूले तपाईंलाई निश्चित तरिकामा देख्न सक्दछन् जब उनीहरूले तपाईलाई पहिलो भेट्छन, र त्यसपछि उनीहरूले तपाईंलाई चिने पछि उनीहरूले महसुस गर्दछन्, 'ओह, तपाईं साँच्चिकै फरक प्रकारको व्यक्ति भएको हुनुहुन्छ।' त्यसोभए तपाईको आरोही तपाई अरूलाई कसरी देखिनुहुन्छ, र तपाईलाई थाहा छ, मेरो आरोहण चिन्ह मिथुन हो।
खैर, यो लेख धेरै लामो न बनाउनको लागि, म प्रत्येक चिन्हको अर्थको विवरणमा जान गइरहेको छैन, प्रत्येक ग्रह र सबै किनकि यसका बारे अनलाइन स्रोतहरू छन्। म वास्तवमै तपाईलाई मेरो ब्लग पोष्टमा पढ्नको लागि साधारण नोटहरू सिर्जना गर्न जाँदैछु, केवल द्रुत कुञ्जी शब्दहरू र प्रत्येक वर्ण, ग्रह, वा घरमा नोटहरू। तपाईंको जन्म चार्ट प्राप्त गरेपछि, तपाईं आफ्नो चिन्ह, चन्द्रमा, र बढ्दो चिन्ह लेख्न सक्नुहुन्छ।
र त्यसोभए तपाईं मेरो ब्लग पोष्टमा मैले राखेको द्रष्टव्यहरूमा एक नजर राख्न सक्नुहुन्छ र प्रत्येक पात्रसँग के मेल खाने भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको मूल त्रिकोण चिन्ह बुझ्ने एउटा तरिका यो जस्तै वाक्यमा राख्नु हो: 'म __ हुँ, आत्माको साथ __, एक मास्क लगाउनुहोस् __ “तपाईंको चिन्हमा निर्भर रहँदा, तपाईंले अर्थ र तपाइँको चिन्हको आर्चटाइप र केवल शब्दहरू जेबमा राख्नुहोस्। मेरो लागि उदाहरण को लागी: म एक कलाकारको मास्क लगाएको दार्शनिकको आत्माको कलाकार हुँ, किनभने एक कलाकार भनेको तुला भनेको के हो, दार्शनिक धनु चन्द्रमाको एक आर्केटाइप हो र शिक्षक एक मुख्य शिल्प हो। जुम्ल्याहा लागि।
म आशा गर्दछु यस बुझेको हो र म आशा गर्दछु यसले सहयोग पायो। त्यसो भए बेसिक्स थियो। गहिरो गोता लगाउनको लागि तयार हुनुहुन्छ? आउनुहोस्! जन्मजात चार्टको घटक अंशहरूको बारेमा कुरा गरौं।
मैले माथि भनें, त्यहाँ १२ स signs्केतहरू छन्, तपाईंले यो भन्दा पहिले सुन्नुभयो - मेष, वृश्चिक, तुला, लियो - यी सबै मलाई थाहा छ तिनीहरू क्रमशः बाहिर छन्। र त्यहाँ दश ग्रहहरू छन्, र 'ग्रहहरू' पछि
सूर्य कंजक्ट बुध भनेको के हो?
जन्मजातसंयोजनबीचमासूर्यरबुध भनेको होतपाईको दिमागले तपाईको मुटुलाई नियन्त्रण गर्दैछ जब यो जीवनको महत्वपूर्ण निर्णयहरू आउँदछ। को समयमासूर्य कन्जेक्ट बुधट्रान्जिट, हामी दिमाग र संचारको मामलामा बढी केन्द्रित हुन जान्छौं, यो धेरै अवलोकनकर्ता समय हो।२ २०२०।
यी सिताराहरूसँग तपाईंको लागि भण्डारमा सँधै अद्यावधिक छ हाई, म मारेन एक पेशेवर ज्योतिषी हुँ, हालको कलेज विद्यार्थी र बोक्सी जो गर्वसाथ झाडू कोठरीबाट बाहिर आउँदछन्, चन्द्र गाँठहरू मेरो मनपर्ने ज्योतिष अवधारणा मध्ये एक हुन् र त्यहाँ भएको छ। त्यहाँ धेरै शोध छन् यसैले म रसिया कलेक्टिवले ल्याएको यो लेखको बारे निश्चित रूपले धेरै उत्साहित छु रसी कलेक्टिव एक प्लेटफर्म हो, मेरो भर्खरै सुरू गरिएको प्लेटफर्म जसले आध्यात्मिक चिकित्सकहरूलाई उनीहरूको आदर्श ग्राहकहरूसँग जोड्छ, उदाहरणका लागि यदि तपाईं एटारोट पाठकहरूको पछि हुनुहुन्छ भने लस एन्जमा खोजी गर्नुहोस् यदि तपाईं रेकी हिलर हुनुहुन्छ तपाईंको सेवाहरू अनलाइन प्रस्ताव गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं आफ्नो सेवाहरू पोष्ट गर्न सक्नुहुनेछ वा वा अन्य मेटाफिजिकल ईएसटोरिक हीलरहरूको लागि तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्नुहुनेछ। सबै विवरणहरू तल सूचीकृत छन् र यदि तपाईं आध्यात्मिक समुदायको भाग हुनुहुन्छ भने यी मेटाफिजिकल विषयहरूमा रुचि राख्नुहुन्छ भने हामी तपाईंलाई हाम्रो सुविधा प्रदान गर्न मद्दत गर्न एक अर्कोको लागि ठाउँ लिनको लागि हाम्रो प्लेटफर्ममा सामेल हुन चाहन्छौं।
संयोगवश, मैले पहिले नै चन्द्रमाको नोडहरूको बारेमा दुईवटा लेखहरू बनाएको छु, एउटा यो ज्योतिषमा नोड्सको अर्थ र के हो भन्ने अन्तर्निहित समझको बारेमा, र अर्कोमा जब तपाईंले यो गर्नुभएन भने चन्द्रमाको ट्रान्जिट नोड्स के लाग्दछ। लेख, ती तल लिंक छन्। त्यसैले म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु कि तपाई सार्थक लेखलाई हेर्नुहोस, अन्तर्निहित लेख औचित्यको साथ, ताकि तपाईले हामी यहाँ के कुरा गर्दैछौं बुझ्नुहुन्छ किनकि synastry सुपरइम्पोजीस ऐ यहाँ रेखाचित्रमा र अर्को रेखामा अन्य ग्रहहरूसँग संचार गर्दै एउटा रेखाचित्रमा ग्रहहरू देखेको छ। ट्रान्जिट जस्तै जुन कहिल्यै निरन्तर चल्दैन जुन यो बाहिरी प्रभाव हो जुन त्यो अभिव्यक्तिको रूपमा अर्को व्यक्तिको क्रान्तिकारी हुन्छ यसको सट्टा यस ट्रान्जिटले उत्तरी नोडको प्रतिनिधित्व गर्दै आकाशमा तरलतापूर्वक चलेको हुन्छ, त्यसपछि हामी दक्षिण नोडको प्रतिनिधित्व गर्ने सिनेटस्ट्री कभर गर्नेछौं र हामी केही आरेख उदाहरणका साथ चीजहरू फेरा पार्नेछौं जुन तपाईंलाई प्रैक्टिस स्पिकरमा बोल्दैछु भनेर विशेष रूपमा देखाउन हामीसँग कुनै व्यक्तिगत बिन्दु वा ग्रहमा गाँठोसँग ठ्याक्कै मेल खाँदैन, जसमा हामी अपरिहार्य रूपमा ओभरसिमुलेटेड वा ड्रेन हुन्छौं। अर्को व्यक्ति द्वारा, हाम्रो चार्टहरूमा नोडहरू झर्ने क्रममा, त्यसकारण अन्तसम्म यो बुझ्नको लागि कि हामी सबैले यसलाई कहाँ लागू गर्न सक्दछौं, हामीसँग एक छ वा छैन सहि। जुन चन्द्रमाको उत्तर नोडमा पुग्छ यसले विस्तार र मुद्रास्फीति प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो होइन जुन हामीले विकास गर्न आवश्यक छ वा के? Synastry मा, तथापि, हामी उत्तरी नोड, जसलाई राहु पनि भनिन्छ, अर्को व्यक्तिको व्यक्तिगत ग्रह वा luminaries वा एक महत्वपूर्ण बिन्दु जस्तै Ascendant MC, IC, मा हुँदा हाम्रो सम्पूर्ण भार लिने वा त्यसमा नराख्न सावधान हुनुपर्दछ। नोड व्यक्तिले सबै चीजको अत्यधिक स्वामित्व महसुस गर्न सक्छ जुन ग्रह वा पार्टनरमा रहेको पोइन्टले प्रतिनिधित्व गर्दछ वा ग्रह व्यक्तिले नोड व्यक्तिले धेरै हेरे जस्तो महसुस गर्न सक्दछ तपाईलाई पनि धेरै दिक्क लाग्न सक्छ जब नोड अरू कसैको व्यक्तिगत ग्रहमा हेर्दा यस ग्रहले कुन घर अवलोकन गर्छ हेर। यस कर्मिक कथाको अधिक प्रस for्गको लागि ग्रह व्यक्तिको रेखाचित्रमा नियम, अर्को व्यक्तिको व्यक्तिगत ग्रह वा पोइन्टमा दक्षिण नोड, पनि केतु पनि पुनः ग्रहण गर्न, ग्रह ग्रहका लागि यो थकाइलाग्दो महसुस गर्न सक्छ, कसरी दक्षिण गाँठ व्यक्तिले बताईरहेको छ र दक्षिण गाँठ व्यक्तिले महसुस गर्न सक्दछ कि उनीहरूको सीमा नाघेको छ वा ग्रहमा हुनुपर्दछ, जानाजानी होस् वा नहोस्, चाहे तपाईं भित्र हुनुहुन्छ वा यी कुनै पनि पक्षहरूसँग त्यस्तो सम्बन्ध रहेको छ।
मलाई यी कार्मिक बन्धनहरूको बारेमा तपाइँको कथा जान्न मनपर्दछ र तल टिप्पणी गर्नुहोस्, यदि तपाइँ तपाइँको कथा साझा गर्न खुला हुनुहुन्छ भने मलाई बताउनुहोस् केवल समुद्रीत मा सम्पर्क बनाउनुहोस्, तपाइँ विगतको जीवन कर्मा गाँठहरूसँग व्यवहार गर्न सक्नुहुन्छ जुन सीधा कर्मिकिकिले सम्बन्धित छ। हामी यस जीवनमा खेल्छौं, यद्यपि यो त्यति गाह्रो छैन जति यो दक्षिण गाँठ अतीत हो हामीले छोड्नु पर्छ र उत्तर गाँठ भविष्य हो हामीले कुनै पनि विकास गर्नुपर्दैन। वास्तवमा, त्यस्तो सरलीकृत सोचाइ प्रायः हानिकारक हुन सक्छ वा केवल पूरै नोड अक्षलाई भ्रममा पार्न सक्छ - जब उत्तर नोड अर्को ग्रह वा बिन्दुमा हुन्छ तब कर्मको चक्र अधिक संवेदनशील कथामा हुन्छ। यसले संकेत गर्दछ कि तपाईं अघिल्लो जीवनमा अर्को व्यक्तिको यस पक्ष द्वारा पूरा भएको थिएन, वा तपाईंले यस जीवनको पार्टनरसँग यी मुद्दाहरूको स्वस्थ एकीकरण सिक्नुभएको छैन, यसले यो पनि संकेत गर्न सक्छ कि त्यो व्यक्ति र उसको ऊर्जाहरू छन्। तपाईको लागि धेरै नयाँ छ र तपाईले तिनीहरुलाई अघिल्लो जीवनमा पाउनु भएन वा ती मानिस जस्तै हुन् जुन तपाईले अघिल्लो जीवनमा पाउनुभएन र त्यसैले चक्र तपाईलाई केही तरिकाले नयाँ हुन्छ जब दक्षिण गाँठ अर्को ग्रहमा हुन्छ वा वा एउटा विन्दु जहाँ यो उस्तै उस्तै पुरानो गीत प्रकारको उर्जा हुन सक्छ जुन तपाईं वास्तवमै प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यो ग्रहको ऊर्जा प्रकारमा ग्रहको व्यक्तिमा निर्भर भएर र / वा तपाई ऊर्जाको साथ हुनुहुन्छ भने यदि तपाई यस व्यक्तिसँग परिचित हुनुहुन्छ भने, यस विगतको जीवन प्वाइन्ट गतिशीलतामा, तपाईं निश्चित रूपमा बताउन सक्नुहुन्छ कि तपाईं यहाँ पहिले यस व्यक्तिको साथ हुनुहुन्थ्यो, तपाईं एनड शायद सायद यो महसुस गर्न चाहानुहुन्छ, यही कारणले दक्षिण नोड कहिलेकाँही निकास गर्छ किनभने तपाईं पहिले नै यहाँ भएको जस्तो गरी हुनुहुन्छ। ।
यसको एउटा उदाहरण डेभिड हो र भिक्टोरिया बेकहम डेभिडको शुक्र उसको दक्षिण नोडको सम्बन्धमा ठ्याक्कै स he्केत हो कि उनी अघिल्लो जीवनमा उनीसँगको सम्बन्धमा गतिशील थिए र उनीहरुले कसरी एक अर्कालाई भेट्टाए र महसुस गरे भन्ने उनको वर्णनबाट। धेरै राम्रा भावनाहरू छन् जुन उनीहरूसँग मिल्दा शुक्र-मंगल ग्रहको मिल्दो जुल्दो छ जसले मद्दत गर्दछ, तर त्यो गाँठ सम्पर्क पछाडिको जीवनमा कसैसँग भएको कडा सूचक हो, एक प a्क्तिमा मात्र होइन, प्रस in्गमा हुन्छ, यद्यपि शुक्रसँग यो कुनै किसिमको संकेत हो। यो उनीहरूको वित्तीय घरहरूमा पनि हुन्छ भन्ने तथ्यमा, त्यसैले यो आश्चर्यजनक होइन कि तिनीहरू कम्पनीहरूमा सँगै सफल भएका छन् किनकि उनीहरूसँग सम्भवतः यसका अघिल्ला अनुभवहरू पनि थिए। एक उदाहरण बिल हो र हिलारी क्लिन्टन हिलारीको उत्तर यसको पर्यटक चन्द्रमामा नै छ, जुन पक्कै पनि उनी एक सूचक हो जुन उनी आफ्नो भित्री संसारमा आकर्षित हुन्छिन्, उनीलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्न चाहन्छे र ब्यारी उनीसँग गहिरो स्तरका घरहरूमा चिन्तित थिए। दोस्रो र आठौं तिनीहरूका लागि हो, तर यो केवल उदाहरण हो यो उदाहरण हो तपाईंको आफ्नै चित्रमा र एस्तीको जीवनमा कुनै पनि घरको अक्षमा पक्कै पनि यस्तो हुन्छ कि यसको मतलब यो हुँदैन कि राहु डरलाग्दो आकर्षक र केतु हुन सक्छ निश्चित रूपमा भयrif्कार रूपमा सन्तोषजनक हुन सक्छ, उनीहरूले देखाए पछि तपाईं उनीहरूलाई अवगत हुनुहुनेछ, तर यसको मतलब यो होइन कि तपाईंको वरिपरि रहनु आवश्यक छ र तपाईंसँग कुनै खास ग्रह वा पोइन्ट छैन भने पनि अर्कोबाट प्रभावित छ। व्यक्ति, जहाँसुकै अर्को व्यक्तिको नक्सामा नोडहरू सिनास्ट्रीमा हुन्छन्, तिनीहरू देखापर्छन् जहाँ जहाँ कुनै व्यक्तिको उत्तरी नोड तपाईंको चार्टमा रहेको एक घरमा पस्दछ, यसले चित्र टुर रंग्दछ जुन उनीहरूले तपाईंलाई पुकार्ने छन् वा ती उनीहरूले तपाईंको जीवनको एक खास क्षेत्र लिने छ र जहाँ जहाँ पनि तिनीहरूको दक्षिणी गाँठ घर तपाईंको कुंडलीमा खस्छ, सम्भवतः तपाईंहरूलाई मिसि ms मिसनमा विगतमा तान्न वा जीवनको त्यस क्षेत्रमा अपहरणकर्ता बान्कीहरूलाई सुधार गर्ने तस्विर पेन्ट गर्नुहोस्। तरिका वा अर्को, यदि तपाईंसँग कुनै खास बिन्दु छैन जुन वास्तवमै हिट भयो तपाईं हाम्रो गाँठ पहुँच ओभरले र synastry हो जहाँ म यो जीवन को यी क्षेत्रहरु मा व्यक्तिको सम्बन्धमा दुवै पागल र खाली महसुस गर्न सक्दछ जहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यति घर को मतलब के साथ भने। तपाईंलाई यो लेख मनपर्‍यो र यसलाई अनौंठो र मूल्यवान पाउनुभयो, तल मेरो निजी परामर्श जाँच गर्नुहोस्। मलाई तपाईको लागि पढ्न मन पर्छ र म सिनास्ट्री पनि प्रस्ताव गर्दछु, तपाईले आफ्नो पढाइको बखानमा विशेष सोध्नु पर्छ।
रसीलाई पनि जाँच्नुहोस् यदि तपाईं मेटाफिजिकल मन्त्रालयहरूको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने तल तल वर्णन गर्नुहोस् वा तपाईंको आफ्नै लिंकहरू वर्णनमा पोष्ट गर्नुहोस् अन्यथा सदस्यता लिने निश्चित गर्नुहोस् र तल टिप्पणी दिनुहोस् यदि तपाईंलाई कुनै सिनास्ट्रिक अनुभव छ भने मूनका नोडहरूको लागि, म जान्न चाहन्छु कि यो सामान्यतया भन्न लायकको कहानी हो, अन्यथा तपाईं लेखहरू जाँच गर्न सक्नुहुनेछ कि स्क्रिनमा पप अप हुने महान् ज्योतिष सामग्रीको लागि म यति धेरै प्रेम पठाउँदै छु र अर्कोमा तपाईंलाई भेट्छु।
ट्राइन ज्योतिष भनेको के हो?
TOtrine(संक्षिप्त ट्राई) १२० को कोण हो (e 360० ग्रहणको १/3) ग्रहको आधारमा somewhere देखि १० बीचको कवचको अर्ब। कोtrineके प्राकृतिक सम्बन्धित छ र सद्भाव र सहजता को संकेत गर्दछ। कोtrineजन्मजात वा प्रतिभा वा क्षमता समावेश हुन सक्छ।
कुन ग्रह भावनाहरूको लागि जिम्मेवार छ?
शुक्र चरम दिन्छभावनाहरु।१ २०१।
कुन ग्रह पैसासंग सम्बन्धित छ?
दुई सबैभन्दा महत्त्वपूर्णग्रहहरुजो ल्याउनपैसा(ग्रहहरुको शासन गर्नेधनरपैसा) बृहस्पति र शुक्र हो। ज्योतिष मा, यी दुईग्रहहरुभनिन्छ धन-कर्कस (को सूचक)धनर समृद्धि)।१ २०२०।
के सूर्य कन्जेक्ट बुध राम्रो छ?
कोसूर्य-बुध संयोजनछराम्रोचरित्रमा प्रभाव पार्छ किनकि यसले व्यक्तिलाई स्थिर पार्छ र वातावरणमा अनुकूल गर्न अझ लचिलो क्षमता दिन्छ।
के तपाईंको सूर्य र बुध चिन्हहरू समान छन्?
किनभनेबुधसबैभन्दा नजिक छसूर्य,तपाईंको बुध चिन्हसधैं मा हुनेछउही चिन्हजस्तोतपाईंको सूर्य चिन्ह, वाचिन्हअघि वा पछाडि, मोन्टको अनुसार? टाढा। (उदाहरण को लागी, यदितपाईं हुनुहुन्छमेष,तपाईंको बुध चिन्हया त मेष, वृषभ, वा मीनमा हुनेछ।)२२ २०१ 2019
एक Trine कति घर छ?
साथै, यस पक्षमा गणित छ: वृत्तको 360 360० तीन भाग गरी १२० हो। कुंडलीको ट्रिन्स। उही तत्वको राशि चिन्ह Trine पक्षमा छन्। पनिबाह्र घरहरूकुंडलीको trine पक्षहरू छन्, छविमा देख्न सकिन्छ।
एक Trine कति वर्ष छ?
Trine(antep पनि भनिन्छ) थ्राको एक परिक्रमा अवधि थियो जुन ग्रेट सनको वरिपरि घुम्छ (लगभग एक पृथ्वी वर्ष बराबर बराबर)।Trineअर्बिटल अवधि मापन गर्ने सबै भन्दा साधारण विधि हो जुन अवधि बर्ष कहिलेकाँही प्रयोग गरिन्छ।